फुक्यो गठबन्धनको गाठो, भोलि देखि काम हुनेभयो धमाधम ! - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
फुक्यो गठबन्धनको गाठो, भोलि देखि काम हुनेभयो धमाधम !
सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलभित्रकै दबाबपछि सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने अन्तिम तयारी गरेको छ । यो सँगै गठबन्धन भित्र बाधिएको गाठो फुकालिने भएको हो । गठबन्धनभित्र कुरा मिल्ने भएपछि देउवा सरकारको कामले गति लिने भएको छ ।
शनिबारको बैठकमा यादवले सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर दलीय व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाएकाले अध्यादेश फिर्ता नभएसम्म सरकारमा नजाने बताएका थिए ।
आइतबारको बैठकमा भने उनी अडान कायमै रहेको भन्दै सहभागी भएनन् । यादवले सो अडान नछाडेपछि शीर्ष तहमा छलफल गरेर निर्णय लिने गरी नेताहरू अध्यादेश फिर्ता गर्न सहमत भएका हुन् ।